Abayili beFashoni abaPhezulu - Iifashoni Tips Zabafazi
Abayili beFashoni abaPhezulu
Nokuba uzibhengeze njengefashoni okanye umntu ozijonga njengengcali yesitayile, amagama amaninzi afika engqondweni xa kusiza awona magama ashushu kwimizi-mveliso yefashoni. Nangona ilizwe lefashoni lisoloko litshintsha, kukho abanye abayili ababonakalise ukuba ngoyena ndoqo kuluhlu lwezinto ezithandwayo ezigqithile kumaxesha efashoni kunye neminyaka.
Eyasungulwa ngo-2006 ngudade oyilo loyilo u-duo uLaura no-Kate Mulleavy, uRodarte ebesoloko efumana i-kudos kwiingcali ezininzi zeshishini lefashoni ukusukela oko uphawu lwasekwayo. Eyaziwa ngokuba yimizobo yoyilo yanamhlanje neyesetyhini eneenkcukacha ezizodwa ezenziwe ngesandla, uRodarte uphumelele amawonga amabini aphezulu kwishishini lezemfashini - iCFDA Swarovski Emerging Womenswear Designer Award kunye ne-Ecco Domani Fashion Foundation Award.
Ugcina njani ngeFashoni yeFashoni
Yintoni uMyili weFashoni?
Abayili beFashoni abadumileyo
Abalandeli bodumo bohlobo oluquka uCiara, uNatalie Portman, kunye noKirsten Dunst ukubala nje abambalwa. Ukongeza kuyilo, oodade baseMulleavy bakwaphuhlise imovie ezimeleyo enesihloko esithi, Woodstock. Vogue Uyile uyilo lomsebenzi we-duo njenge-'Great American Indie Fashion Story. ' URodarte uthengiswa nge ModaOperandi.com , FWRD.com , Yoox.com , kunye Shopbop.com .
URodarte Abafazi Abasetyhini iTuxedo Blazer
Xa kufikwa kuluhlu oluphezulu, amanani adlala eyona ndima iphambili kuluhlu. Ngoku ka Iindaba zezihlangu , ULouis Vuitton wayengomnye wabayili abathandwayo abakhangeliweyo kwi-Instagram ene-19.9 yezigidi. Ukusuka kumzuzu obomvu obomvu wekhaphethi ukuze ube neebhegi, uLouis Vuitton yenye yezona ndlu zaziwayo zefashoni kwihlabathi.
ndingafumanisa njani ukuba umntu uqhawule umtshato
Umlawuli wangoku weLouis Vuitton nguNicolas Ghesquière, ocatshulwe esitsho WWD ukuba indima yomyili wefashoni 'kukunyaniseka kuwe' kwaye 'wenze utyikityo olomeleleyo, into eyaziwayo kwaye kwangaxeshanye ukudala umnqweno.' Ngokubanzi, uyilo olubandakanywe kwingqokelela yeLouis Vuitton zii-silhouettes ezincinci zejometri ezinomtsalane wabasetyhini kunye nokuchukumisa okuncinci kwe-avant-garde. Ingqokelela yokulungela ukunxiba kunye nezixhobo ziyafumaneka Iwebhusayithi kaLouis Vuitton . Nangona kunjalo, ukuba ibhegi yento oyikhangelayo uze uzame iivenkile ezinje Imvu.com , Bloomingdales.com , uze ukhethe Iivenkile zikaNeiman Marcus .
ILouis Vuitton Monogram Clutch Handbag
Phantse lonke ixesha leVeki yeFashoni yaseNew York lixesha elinomdla kubabukeli bemveliso yefashoni, kodwa kukho umyili omnye ngokukodwa othathe indawo ephezulu njengofumana eyona buzz kunye nokuzibandakanya kwidijithali kwimiboniso yakutshanje. UVictoria Beckham une-5,661,938 yokuzibandakanya kwabathengi kwimidiya yoluntu, emele ipesenti ye-17 yako konke ukubandakanyeka, njengoko kuchaziwe kwi inqaku kwiWWD .
I-Spice Girl yangaphambili eyayinomdla obambe ixesha elide kuyilo ibethe uphawu lwayo kwihlabathi loyilo. Uyilo lwe-Beckham luhlala lubalaselisa ukukhuthazwa kwe-silhouette ukusuka kwi-40 ukuya kwi-50s ukulungiselela uluhlu lweemilo zabasetyhini kunye nobukhulu. Ingqokelela yeVictoria Beckham ithengiswa nge Net-a-porter.com kwaye YiVictoriaBeckham.com .
kukonwabisa umdlalo ewe okanye hayi
UVictoria Beckham unxibe enye yamagxa
Ukuba indlu yefashoni inomkhosi, ulungelelwaniso olo luthethelela njengophawu lwefashoni ephezulu. Ngoku ka Ukutsala Iphephancwadi, iBalmain Army iqulathe 'It Girl' muses ukusuka ku-Gigi Hadid kunye no-Kendall Jenner ukuya kwii-supermodels ezinje ngeJourdan Dunn kunye nee-90s ii-icon ezinje ngoCindy Crawford, bonke abo bacinga phambili kwaye benamandla okuqhubela phambili.
Indlu yefashoni yaseBalmain ijongiwe nguMlawuli wezoBuchule u-Olivier Rousteing, othe wakhulisa ingeniso yolu hlobo ngepesenti ezingama-50 phakathi ko-2013 no-2015 okoko wathabatha inkampani eneminyaka engama-25, ngokwe UMgcini . Uyilo lwempahla ngaphakathi kwengqokelela lunezimo ezininzi zerocker. Ukuba uyathanda ukunxiba amalaphu obutofotofo kunye nokuhonjiswa okutyebileyo, iBalmain luphawu ongathanda ukulinxiba. IBalmain ithengiswa nge UNeiman Marcus , Farfetch.com , kunye IBalmain.com .
UPierre Balmain Velvet Blazer
Umyili wezinxibo zemidlalo uMichael Kors wenza izinto zokunethezeka kunye nezinto ekulungele ukunxitywa zamadoda nabasetyhini. Yasekwa ngonyaka we-1981, umyili wabekwa kwinqanaba njenge-8th elandelwa kakhulu kumyili kwi-Instagram ngokwe IHarper's Bazaar . Uyilo lukaMichael Kors luqhelekile phakathi kweeklasikhi ezingapheliyo kunye ne-glam yemihla ngemihla. Uyilo olucwangciswe kakuhle lunokunxitywa kuyo yonke indawo yokuphila kwabafazi baseMelika. Ukuqokelelwa komyili kuyathengiswa Indawo yeNordstrom.com , UMichael Kors boutiques, kunye UMichaelKors.com .
UMichael Kors Bradshaw Bukela
Xa kuziwa kwikhaphethi ebomvu, uphawu lwefashoni luka-Alexander McQueen, olonganyelwe ngulowo wayesakuba ngumqambi wajika waba nguMlawuli woBunjineli uSara Burton, yingqokelela eyathandwa ngabafashoni ukujonga abantu abadumileyo abanjengoJessica Chastain noNicole Kidman. I-brand ye-Alexander Mcqueen yasekwa ngumyili osekupheleni kuka-1992 kwaye yaqhubeka nokukhula ekuthandeni kuyo yonke le minyaka.
Nangona uphawu luphehlelelwe ngaphambi kwexesha ledijithali, indlu yoyilo inezinto ezilandelayo ezingama-67.4 ezigidi zabalandeli kwi-Instagram nakwi-Twitter nge-66 yepesenti yokunyuka kwe-IG ukusukela ngoSeptemba 2016, ngokuka IHollywoodReporter.com . Ingqokelela inokuchazwa ngcono njengokumangalisa kunye nezalathiso zembali ezibonakalayo kuyilo lomfanekiso, iinkcukacha kunye nolwakhiwo. Abathandi baka-Alexander McQueen banokuthenga ingqokelela e UBergdorf Goodman , Farfetch.com iwebhusayithi , kunye Indawo yeNeiman Marcus .
UAlexander McQueen Swallow Poncho
uxolelana njani emva kokwahlukana
Ngelixa uninzi lwabayili befashoni abaphambili bekhokelela kwaye besenza ulwalathiso lwezindlu zefashoni ephezulu, kukho abathile abaye baqalisa ngokusesikweni ilifa labo ngokusungulwa kweenkampani zabo. Umyili wangaphambili weGucci kunye neYves Saint Laurent, uTom Ford wasungula uphawu lwentengiso ngo-2006, olubandakanya iimpahla zabasetyhini, iimpahla zamadoda, ubuhle, izambatho zamehlo kunye nezinye izinto.
Ixesha Iphephancwadi lifake uTom Ford kuluhlu lwamaxesha e-100 anefashoni ukusukela ngo-1923. Ingqokelela yeTom Ford inezinto zokwakha iimpahla ezimdaka kunye nezilukhuni. Ingqokelela yakhe inokuthengwa nge Tomford.com , Indawo kaYoox.com kwaye NeimanMarcus.com kwi-intanethi .
UTom Ford Izibuko zelanga
Umyili ophumelele amabhaso uJoseph Altuzarra wayenomzuzu ophambili obomvu kwikhaphethi ebomvu ngo-2017 xa ibango lebhulukhwe yakhe eyayilungiselelwe lanyuka emva kokuba u-Evan Rachel Wood otyunjiweyo wase Westworld ebanxibe ngokukodwa kumaxesha amabhaso. Njengoko kuchaziwe inqaku kwiHollywoodReporter.com , U-Altuzarra wabelane, 'I-velvet blazers zethu ezivela kwingqokelela yasebusika ekwindla efanayo naleyo yayinxitywe ngu-Evan [kwiGlobes] bezithengiswa.'
Uyilo ngaphakathi kwengqokelela yeAltuzarra lunempembelelo yaseMelika kunye naseFrance equka iinkcukacha zobufazi kunye nezambatho ezilungisiweyo, iiblazers, iibhulukhwe, iihempe kunye neempahla. Uyilo lomamkeli ngembasa we-2014 CFDA Womenswear Designer yoNyaka kunye ne-2012 CFDA Swarovski ibhaso leWomenswear inokufumaneka e KaBarney , I-Avenue yeSaks yesihlanu , kunye Altuzarra.com .
I-ALTUZARRA I-Shirt yePeyinti
Fumana oyena Myili ubalaseleyo weSitayile sakho
Kwindawo yanamhlanje yoyilo lwefashoni uninzi lwabayili abaphezulu banempembelelo kwindlela abanxiba ngayo abafazi. Nokuba sithini na isitayile sakho, indalo esemgangathweni yeshishini lefashoni yeyona ifikelelekayo kwi-Intanethi nakwiivenkile zesebe. Ukuba noyilo ngomnye wabayili abaphambili kuya kuqinisekisa ukuba unoluhlu kuluhlu olunxibe kakuhle.
Petite Women's Clothing Ikhitshi Uhlaziyo Malunga Movie I-Origami Izilwanyana Umartinis
Ulwimi lomzimba lomntu othandweni
Ungayicoca njani iijacuzzi tub jets ngeviniga
Ungayingqinisisa njani i-louis vuitton bag
Uyenza njani i-strawberry daiquiri?
izinto onokuzithetha kumyeni wakho ukuze ancume
zithini izifinyezo kuwo onke ama-50